Cilmi-baarista ereyga muhiimka ah waa inay ka jawaabtaa su'aalahan | Martech Zone
Cilmi-baarista ereyga muhiimka ah waa inay ka jawaabtaa su'aalahan
Waxaan daawanay shirkado badan oo sameeya waxa ay ugu yeeraan cilmi-baarista muhiimka ah waxaanan layaabay inta macluumaad ee ay tabayaan markay shirkadaha kala talinayaan waxa ereyada muhiimka ah ee lagu bartilmaameedsanayo xeeladahooda suuq-geynta waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Waa kuwan qaar ka mid ah su'aalaha muhiimka ah ee aan ka jawaabno
Waa maxay ereyada muhiimka ah ee keena isbeddelada? Hadaadan ogayn waan kula talin lahaa Kalluumaysiga Analytics si sax ah oo ka warbixinaya si aad u aqoonsan karto ereyada furaha u ah ganacsiga… ee aan taraafikada ahayn. A khalad fure waxaan u aragnaa shirkado badan inay diiradda saarayaan ereyada muhiimka ah ee keena taraafikada halkii ay ka ahaan lahaayeen ereyada muhiimka ah ee ganacsiga kaxeeya. Helitaanka si sharci ah loo kala sareysiiyo waxay qaadataa waqti - hubi inaad kubixineyso ilahaas si caqli gal ah adoo dhab ahaan ku qiimeynaya booqdayaasha iibsanaya. La-taliyayaashu badiyaa waxay helayaan ereyada muhiimka ah ee leh mugga raadinta badan. Ilaa aad ku iibineyso xayeysiinta bartaada, waxaad u baahan tahay wax ka badan booqashooyinka - waxaad u baahan tahay ganacsi
Maxay yihiin ereyada muhiimka ah ee aad hadda u kala sarreysaa? Sababtoo ah shirkaduhu waxay waqti badan ku qaataan falanqaynta taraafikada, waxay inta badan tabayaan ereyada muhiimka ah ee aysan si fiican ugu qiimeynin laakiin waxay noqon kartaa. Aqoonsiga ereyada muhiimka ah iyo bogagga aad ku aasan tahay qiimeynta waa fursad raaxo leh dhaji bogaggaas oo darajo fiican ku hel. Waan isticmaalnaa Xeebaha si loo helo bogag iyo ereyo-fure ah oo aan ku kala horreynno. Ka dib waxaan u hagaajineynaa boggagaas oo inta badan waxaan ku helnaa darajo wanaagsan xagga darajada iyo taraafikada.
Waa maxay mawduucyada dhexe ee ereyada muhiimka ah loo kala saari karo? Bogagga boggaaga waxay u kala sarreyn karaan daraasiin isku-dhafan ereyada muhiimka ah. Waxaa muhiim ah in la fahmo mowduucyada muhiimka ah ee ereyadaada muhiimka ah ay la jaan qaadi karaan iskuduwaha websaydhkaaga iyo isku hagaajintiisa. Kala sareynta goobtaadu miyey u dhigantaa kala sarreyntaada muhiimka ah? Haddii kale, waxaa jiri kara fursado lagu dhiso bogagga iyo qaybaha bogga ee diiradda saaraya taraafikada raadinta dabiiciga ah. Waxaan inta badan kugula talineynaa bogag deg deg ah oo dabiici ah oo diiradda saaraya ereyga muhiimka ah halkii laga soo saari lahaa wax soo saarka ama adeegga shirkadda. Bogaggaasi waxay wadaan darajo, taraafikada, iyo beddelaad. WordStream wuxuu leeyahay aalad fure ah oo aad ku dhajin karto 10,000 oo eray oo muhiim ah iyagaana kuu kala saari doona adiga.
Waa maxay ereyada muhiimka ah ee aad u tartami karto? Marar badan, tartankaagu wuxuu helayaa taraafiko aad noqon karto… haddii aad kaliya fahamtay waxa ay ku kala sarreeyeen ee aadan ahayn. Sidoo kale, ereyo badan oo muhiim ah ayaa laga yaabaa inaysan macquul aheyn in lagu gaaro darajo wanaagsan. Maxaad ugu tartameysaa ereyada muhiimka ah ee aadan guuleysan doonin? Mar labaad, Xeebaha ayaa xulashadeenu ahayd tan. Waxaan eegi karnaa aagagga tartamaya ka dibna dib u eegi karnaa ereyada muhiimka ah ee tartankayagu u kala baxayo si aan u aragno haddii aan ka dhimannay istiraatiijiyaddeenna nuxurka ah.
Maxay yihiin ereyada muhiimka ah ee aad ku abuuri karto waxyaabaha ku saabsan taas oo keeni doonta qiimeyn iyo taraafikada? Way fiican tahay in la soo saaro liis ah halbeegyo keywords ah iyo weedho isku mid ah… laakiin weedho noocee ah ayaad ku qori kartaa qoraalada baloogyada, bogagga degitaanka dabiiciga ah, sawirada, joornaalada, joornaalada, bandhigyada iyo fiidiyowyada maanta taasi waxay keeneysaa natiijooyin deg deg ah? Ma aaminsani in cilmi-baarista ereyga muhiimka ahi ay dhab ahaantii dhammaystiran tahay haddii aad bixinaysid talooyin nuxur ah oo ay la socdaan falanqaynta. Helitaanka erey-dheer (mug hooseeya, aad u khuseeya) ereyada muhiimka ah ayaa si sahlan loo isticmaalay WordStream.
By habka, haddii aadan arag interface interface cusub ka soo hagaagtay ka Xeebaha, waa wax cajiib ah:
Waxaan u muuqanaa inaan isticmaalno Xeebaha falanqeyn kooban iyo WordStream oo loogu talagalay daahfurka muddada dheer iyo kala soocidda ereyada muhiimka ah. Bixinta: The Xeebaha isku xirka boostadan ayaa ah isku xirkeena xiriirka.
Tags: keywordcilmi-baarista muhiimka ahkeywordskeyword keywordsemrushsocodka ereyga
Jawaabta Bulshada iyo ROI ee Warshadaha